ဆန္ဒပြသူများမှာ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးအား ငြိမ်းချမ်းစွာ ထုတ်ဖော် ကျင့်သုံးရုံမ ျှဖြင့် အဆိုပြုထားသည့် ပြင်ဆင်ချက်များကြောင့် ဖမ်းဆီးခံ၊ ထောင်ချခံရဖွယ်ရှိနေသည်
ရွှေမြန်မာမှာ ပုလင်းဖုံး စုဆောင်းကြည့်ခြင်း
ဂျာရတ် ဒေါင်းနင်း ရေးသားသည်။ ကျွန်တော်သည် ယခုအပတ် စာစောင်အတွက် အမှိုက်များ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းတစ်ပုဒ်ကို ရေးခဲ့သည်။ တိုက်ဆိုင်စွာပင် ပုလင်းဖုံး စုဆောင်းသော အလုပ်ကို ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားမိသွားပြန်သည်။ ကျွန်တော်၏ ရည်မှန်းချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ နယ်နိမိတ်အတွင်း ရရှိနိုင်သော ပုလင်းဖုံးများ အားလုံးကို စုဆောင်းရန်.
“ယခုလိုရှုပ်ထွေးလှတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအတွက် အချိန်လိုအပ်ပါတယ်” – ရိုလန် ကိုဘီယာ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အီးယူအတွက် အဓိကဦးစားပေး နယ်ပယ်အချို့က ဘာတွေလဲ။
ရန်ကုန်၊ မေ ၁၃ ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင် တည်ဆောက်ရန် စီစဉ်ထားသည့် Parkway Yangon ဆေးရုံစီမံကိန်းတွင် အဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့်သူများက စီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် လွှတ်တော်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် အစိုးရထံမှ တရားဝင်အသိပေးချက်ကို စောင့်ဆိုင်းမည်ဟု ပြောကြားလိုက်သည်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၇၀ တန် ဆေးရုံစီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော်က မေ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ .
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်မည်
အရပ်သားအစိုးရလက်ထက်တွင် ပထမဆုံး လာရောက်မည့် အမေရိကန်၏ အဆင့်မြင့် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနပိုင် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံလေးရုံ၊ ပုဂလိကပိုင် စက်ရုံလေးရုံဖြင့် ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးပေးလျက်ရှိ